लेखक: जोआना कोर्टेज हर्नान्डेज
कार्यहरूमा समुदायहरूलाई परिचालन गर्दै
Joanna Cortez Hernandez मा जुलाई 30, 2020 द्वारा लिखित।
विगत १ years बर्षको एक महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको मानिसहरुको वित्तीय सुरक्षामा सुधार गर्नु भनेको उनीहरूको व्यक्तिगत वित्तीय छनौट भन्दा धेरै कुरा गर्नु हो। धेरै जसो केसहरूमा, यसको नागरिक जीवनसँग यसको केहि कुरा छ।
यहाँ कुरा हो - वित्तीय सुरक्षा राजनीतिक हावा र आर्थिक संरचनासँग घनिष्ट रूपमा जोडिएको छ जुन हामीले छायाँमा र समाजको छेउमा सेवा गर्ने धेरैलाई राख्छौं।
केही ग्राहकहरूको लागि यो बैंक खाता खोल्ने वा उचित तलबका लागि सोध्ने बेला यस देशका आप्रवासीहरूले सामना गर्ने अवरोधहरूको बारेमा पनि हो। अरूहरूका लागि यो उनीहरूको पैसाको मात्राको आधारमा न्याय गरीएको र व्यवहार गर्ने तरिकाको बारेमा हो। दिन प्रति दिन, सबै क्लाइन्टहरूमा, हामी देख्छौं कि राजनीतिक वास्तविकता र सांस्कृतिक कथाले उनीहरूको वित्तीय जीवनलाई वास्तविक र दैनिक रूपमा प्रभाव पार्छ।
COVID-१ to लाई संघीय सरकारले दिएको प्रतिक्रिया भन्दा बाहेक अरू कुनै कुराले यो कुरा प्रस्ट पार्दैन। त्यहाँ करोडौं आप्रवासीहरू छन् जसले अमेरिकी कर प्रणालीमा भुक्तानी गर्छन् र समुदायहरूलाई अर्थपूर्ण हिसाबले योगदान गर्छन्। अझै, ती मध्ये धेरै CARES ऐन बाहिर बन्द थियो। यो कसरी वर्तमान अन्यायपूर्ण राजनीतिक प्रणालीहरु हामी सबैको आन्तरिक मूल्य पहिचान गर्न असफल को एक उदाहरण हो।
एमएएफ का सीधा कार्यक्रम र सेवाहरू हामी अग्रणी गतिविधिका काम एन्कर गर्दछौं। लामो समयदेखि विश्वास गर्नेहरू जुन कम आय र आप्रवासी समुदायहरू विज्ञहरू हुन् र उनीहरूको आफ्नै जीवनको वकालत गर्छन्, हामी उनीहरूको कुरा सुन्दै छौं।
तिनीहरू एक राष्ट्रिय भाषणसँग निराश छन् जुन उनीहरूको मानवतालाई सक्रिय रूपमा इन्कार गर्दछ, संस्थागत जातिवादको प्रणाली जसले गरीबीको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ, र बहिष्करण आप्रवासन नीति जसले मानिसहरूलाई आवश्यक सेवाहरू र उनीहरूको अवसरहरूको पहुँचमा रोक लगाउँछन्।
दिन प्रतिदिन के कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छ परिवर्तनको आवाश्यक आवश्यकता हो। र व्यक्ति - साँचो विज्ञहरू - यसको अगाडि र केन्द्रमा हुनु आवश्यक छ।
त्यसकारण हामी जानाजानी थपेर हाम्रो समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोणमा आफूलाई प्रतिबद्ध गर्दैछौं परिचालन काम को एक बढ्दो शरीर को रूप मा। त्यसो गरेर, हामी सोचविचारपूर्वक क्रियात्मक उपकरणहरू, संसाधनहरू, र अभियानहरू डिजाइन गर्न जुन हाम्रो परिवर्तनको अग्रणी स्थानमा राख्छ र नागरिक कार्य गर्न तिनीहरूलाई परिचालन गर्न हाम्रो धेरै शक्ति समर्पित गर्छौं।
सही एमएएफ फेसनमा, हाम्रो मानहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गर्दछ। हामी हाम्रो कामको मुटुमा सment्लग्नता राख्दै हाम्रा कार्यक्रमहरू र सेवाहरूको निर्माण गर्दैछौं। हामी समुदायको शक्तिलाई दोहो .्याइरहेका छौं उनीहरूको आवाजलाई माथि उठाउँदै र परिवर्तनका लागि एक शक्तिको रूपमा जीवन अनुभवहरू। हामी देशभरका अन्य वकिलहरूसँग मिलेर काम गर्न जारी राख्दछौं जसले नागरिक सहभागिता मार्फत समुदायहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्यहरू साझा गर्छन्।
हामीलाई के थाहा छ कि समुदायहरू शक्तिशाली छन्। उनीहरूले के बोल्नु पर्छ भन्ने विषयमा र व्यक्तिहरू तिनीहरूको उत्तम स्व-वकीलहरू हुन्।
हामी नागरिकलाई व्यस्त हुनको लागि सशक्त बनाएर मानिसहरूलाई उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको बारेमा जोड दिन मदत दिन चाहन्छौं। र हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ। पछिल्ला केही महिनाहरूमा, हामी डिजाइन र परीक्षण टेक्नोलोजी गर्न कम आय र आप्रवासी समुदायलाई जनगणनामा भाग लिन सहयोग गर्नुहोस्। चाँडै हामी एक गेट आउट आउट भोट (GOTV) अभियानको अनावरण गर्दैछौं ग्राहकहरु संग कसरी कुराकानी गर्न को लागी उनीहरू आफ्नो जीवन लाई सबैभन्दा धेरै समस्याहरु बाट कदम चाल्न को लागी कुरा गर्न सहयोग गर्न।
हामीले सेवा गर्ने कम आय र आप्रवासी समुदायहरूको साथसाथै, एमएएफले यस्तो संसारको पुन: कल्पना गरिरहेको छ जहाँ हामी सबैको शक्तिको उत्सव मनाउँछौं, र राजनीतिक प्रणालीहरूले हामी सबैलाई समान सम्मान र मर्यादाका साथ व्यवहार गर्छन्। यस्तो विश्व जहाँ शक्तिशाली आख्यानहरू हाम्रो वास्तविकताहरूसँग मिल्दछ, र हामी सबै हाम्रो पूर्ण आर्थिक र नागरिक सम्भावनामा पुग्न सक्दछौं।
एक समान प्रणाली निर्माण गर्न अगाडि निकै धेरै कामहरू छन् जुन सबै व्यक्तिको अन्तर्निहित सामर्थ्यलाई पहिचान, उत्थान र अधिकार प्रदान गर्दछ। हाम्रो बढ्दो कामको शरीरको बारेमा र अधिक जानकारीका लागि सम्पर्कमा रहनुहोस् हामीसँग सामेल हुनुहोस् ताकि हामी सबै मिलेर देशभरका समुदायहरूलाई नागरिक संलग्नतातिर परिचालन गर्न सक्दछौं।
SB 455 अद्यावधिकहरू: CA वित्तीय सशक्तीकरण कोष
Joanna Cortez Hernandez मा सेप्टेम्बर 5, 2019 द्वारा लिखित।
एमएएफले एसबी5455 लाई प्रायोजित गरिरहेको छ, जसलाई क्यालिफोर्निया वित्तीय सशक्तिकरण कोष पनि भनिन्छ, जसले प्रभावकारी वित्तीय शिक्षा र सशक्तिकरण उपकरणहरू दिने गैर-नाफामुखी संस्थाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन १ टीटीपीटी T मिलियन कोष खडा गर्ने छ।
एसबी5455 सर्वसम्मतिले दुबै क्यालिफोर्निया विधायित्व कक्षहरू बिनविरोध पारित गरियो र मेयरहरू र गैर-नाफामुखी संगठनहरूको फराकिलो गठबन्धनको राज्यव्यापी समर्थन प्राप्त गर्‍यो। अक्टोबर २ मा, क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेविन न्यूजमले SB 455 कानूनमा हस्ताक्षर गरे!
MAF प्रायोजक SB 455: CA वित्तीय सशक्तीकरण कोष
Joanna Cortez Hernandez मा मार्च 6, 2019 द्वारा लिखित।
अमेरिकामा उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको आर्थिक जीवन निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउन वित्तीय उत्पादनहरू र सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ। बै to्कहरूको साथसाथै उपभोक्ताहरूलाई ठिक आर्थिक निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउन सम्पूर्ण वित्तीय योजना र सल्लाह उद्योग पनि छ।
तर कम आय भएका अमेरिकीहरूका लागि यस सल्लाह र समर्थनमा पहुँच - सेवा जुन उनीहरूलाई उनीहरूको जटिल वित्तीय जीवन प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ - सीमित छ, उत्तममा।
२०१ 2018 मा, अमेरिकाले कम आय भएका उपभोक्ताहरुका लागि १ टीटीपी २ टी TT० मिलियन वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्यो - त्यो राशि जुन आर्थिक वर्ष ११११ टीटीटी भन्दा थोरै बराबर रकम योजना र सल्लाह उद्योगको कुल राजस्वको १ राजस्व (१TP2T57 अरब) हो। खर्चमा भएको अन्तरले यो दर्साउँछ कि हामी कसरी अपर्याप्त रूपमा उपभोक्ताहरूलाई समर्थन गर्दछौं जुन आर्थिक रूपमा कमजोर, सीमान्तकृत र मुख्यधाराका वित्तीय संस्था र सल्लाह उद्योग द्वारा अंडरस्वेर्डेड छ।
यी समुदायहरूलाई उच्च गुणस्तरीय आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न संसाधनहरू अवस्थित छन्। यो केवल अधिक प्रभावी तरिकामा अवस्थित संसाधनहरूको पुनः वितरणको कुरा हो।
अक्टोबर २ मा, Govenor Gavin Newsom ले हस्ताक्षर गर्नुभयो सेनेट बिल5455 क्यालिफोर्निया वित्तीय सशक्तिकरण कोष - एक १ टीटी २ टी million मिलियन कोष को लागी लाभदायक शिक्षा शिक्षा र सशक्तिकरण उपकरणहरु प्रदान गर्ने राज्यव्यापी पूर्वाधारलाई सहयोग पुर्‍याउन उपभोक्ताहरुलाई उनीहरुको आर्थिक कल्याण सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन।
एसबी5455 को बित्तिकै, क्यालिफोर्निया राज्य अब सक्रिय वित्तीय शिक्षा र सशक्तिकरण उपकरणहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्रियतासाथ लागिरहेको छ। विधेयकले यी प्रयासहरू कसरी डिजाइन र डेलिभर भएका छन् र यस महत्वपूर्ण काममा बोक्नको लागि सरकारी पैसा ल्याउँदछ भन्ने स्पष्ट मानकलाई माथि उठाउँदछ।
एफआर्थिक कल्याण भनेको अन्तिम गन्तव्य होईन, न त एकल लक्ष्य जुन व्यक्तिहरू पुग्न आवश्यक छ। बरु, वित्तीय कल्याण भइरहेको निरन्तर अवस्था हो। यो हाम्रो जीवनको दौडान हाम्रा सबै वित्तीय आवश्यकताहरू र दायित्वहरू पूरा गर्न सक्षम हुनुको बारे हो। र त्यसो गर्नको लागि, हामीलाई जटिल वित्तीय प्रणालीहरू नेभिगेट गर्न प्रभावकारी उपकरण र सल्लाह आवश्यक छ।
जब हामी हाम्रो आर्थिक जीवनहरू सेट भएको सोच्छौं, हाम्रो नियन्त्रणबाट बाहिर हाम्रो विश्वास र आर्थिक कल्याण हिलाउन सक्छ। उदाहरणका लागि संघीय कामदारहरूको वित्तीय स्वास्थ्य लिनुहोस् जसले jobs हप्ताको लामो सरकार बन्दको बेलामा उनीहरूको जागिरबाट बाध्य भएका थिए; २1१ टी १ टी टीले खानाको टेबुलमा खाना राख्नको लागि बैंकहरूमा जाने रिपोर्ट गरेको थियो र 42२१TP१ टीले उनीहरूको दैनिक-दिनको खर्च पूरा गर्न नयाँ debtण लिएको छ। सबैभन्दा लामो शटडाउनले यस सरल तथ्यलाई स bear्केत गर्दछ: सब भन्दा सुरक्षित रोजगारी भएकाहरू पनि आर्थिक रूपमा कमजोरबाट हप्ताहरू टाढा छन्।
SB5455 MAF को लागी महत्त्वपूर्ण छ तर यो वित्तीय सशक्तिकरण क्षेत्रको लागि अझ ठूलो पल हो। यसको खण्डले हामीलाई उच्च मापदण्डहरू सेट गर्न अनुमति दिनेछ कसरी प्रभावी वित्तीय शिक्षा डिजाइन र डेलिभर गर्ने.
एमएएफ, धेरै नाफामुखीहरू जस्ता, प्रभावकारी वित्तीय उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन फरक पार्दैछ। पछिल्ला दशकमा, हामीले सिक्यौं कि वित्तीय र शिक्षाको साथ सुरक्षित र किफायती उत्पादनहरूको जोडीले व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको वित्तीय जीवनमा प्रभावशाली नतीजाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। जब ग्राहकहरू हाम्रो Lending Circles कार्यक्रममा लागू हुन्छन् तिनीहरूले नि: शुल्क अनलाइन वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रमहरूमा पहुँच प्राप्त गर्दछन्, र time 45१TP1T पहिलो पटक loanण ग्राहकहरू न्यूनतम आवश्यकता भन्दा बढी हेर्नुहोस्। Lending Circles ग्राहकहरू त्यसपछि १ credit8 अ points्कको औसतले उनीहरूको क्रेडिट स्कोर सुधार गर्न, १ -२२ टी १,००० द्वारा उच्च लागत debtण तिर्ने र loans 99.TP१TP१ टी चुक्ता दरमा उनीहरूको loansण चुक्ता गर्न सक्षम छन्। हाम्रो ग्राहकहरु को धेरै, बोनी (आफ्नो कथा पढ्नुहोस्) यहाँ), तिनीहरूले अनलाइन सिक्ने अवधारणाहरू लागू गर्न सक्षम छन् - चाहे यो क्रेडिट वा होमबुइbuको बारेमा हो - उनीहरूको क्रेडिट निर्माण गर्न र वित्तीय सेवा संसारमा तिनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न।
हाम्रो क्षेत्रका नेताका रूपमा हामीले आर्थिक शिक्षा र सशक्तिकरणका वरिपरिका समुदायहरूलाई कसरी संलग्न गर्ने भन्ने बारे इमान्दार कुराकानी गर्न आवश्यक छ।
वित्तीय उत्पादन र सेवाहरू सकारात्मक रूपान्तरण प्रभावको लागि प्रभावकारी ढ be्गले डेलिभर गर्नुपर्दछ। हामीले फेला पार्यौं कि पहिलो पटकको MAF clientsण ग्राहकहरूको 91% ले उनीहरूसँग पहिले नै भएको उत्पादनको बारेमा जान्नका लागि रोजेका थिए। यसले यो संकेत गर्दछ व्यक्तिहरू आफूले प्रयोग गरिरहेको उत्पादनहरू र वित्तीय शिक्षा जीवनभरि सिक्ने प्रक्रियाको बारेमा अधिक जान्न भोकाउँछन्। व्यक्तिहरू उनीहरूलाई उपलब्ध उत्पादनहरू कसरी प्रयोग गर्ने जान्न चाहन्छन् जसले गर्दा उनीहरूको वित्तीय कल्याण बढाउन सक्दछन् र हामी यसलाई सान्दर्भिक वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेर समर्थन गर्न सक्छौं। एसबी5455 ले वित्तीय सशक्तिकरणको लागि मार्गहरू निर्माणको अग्रभागमा सामूहिक शक्ति निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जसले हाम्रो वित्तीय प्रणालीहरू कसरी काम गर्दछ भन्नेमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ।
सबैजना, ती दुवै जसलाई वित्तीय मुख्यधारको प्रणालीबाट समावेश र समावेश गरिएको छ, वित्तीय उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा धेरै सिक्नुपर्दछ। जटिल वित्तीय प्रणाली नेभिगेटको बारेमा केहि पनि सहज छैन। हामीले कसरी प्रभावकारी वित्तीय शिक्षा दिने भन्ने बारे सोच्न आवश्यक छ - त्यस्तो तरीकाले जुन सबै समुदायहरूको आर्थिक बृद्धिलाई उत्प्रेरित र माथि उठाउँदछ।
हाम्रो र हाम्रो समुदायहरूको लागि वित्तीय कल्याणको मामिलाहरू। SB 455 क्यालिफोर्निया मा उपभोक्ताहरु को आर्थिक स्वास्थ्य प्राथमिकता।
हामी वित्तीय सशक्तिकरण क्षेत्रमा हाम्रो कामलाई माथि उठाउँदैछौं ठूला प्रणाली परिवर्तनहरूको नजरमा। वित्तीय कल्याण सबै समुदायहरूको लागि वास्तविकता हुनुपर्दछ, विशेष गरी ती मुख्यधारा वित्तीय संस्थाहरू द्वारा प्रायः बेवास्ता गरिएकोको लागि, र SB 455 यो हुनको लागि एक स्टेपिंग स्टोन हो। हामी एसबी5455 को राज्य-व्यापी मापदण्ड र कोषमा पार्ने असरहरु हेर्न हामी उत्सुक छौं।
अधिक अपडेटहरूको लागि सामाजिक मीडियामा एमएएफ पछ्याउन निश्चित गर्नुहोस्!
जोआना कोर्टेज हर्नान्डेज, एमएएफ
सार्वजनिक चार्ज वक्तव्य रिलिज: आप्रवासी परिवारहरूको लागि माथि गतिशीलतामा अवरोध
Joanna Cortez Hernandez मा डिसेम्बर 3, 2018 द्वारा लिखित।
एमएएफले हालै प्रस्तावित सार्वजनिक चार्ज नियमको बिरूद्ध तल बयान सबमिट गर्‍यो। हामी तपाइँ सबैलाई डिसेम्बर १० मा सार्वजनिक टिप्पणी अवधि बन्द हुनु अघि तपाइँको आवाज सुन्नको लागि प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं। संरक्षण आप्रवासी परिवार गठबन्धन एक डिजाइन गरेको छ अनलाइन टिप्पणी पोर्टल सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रिया सजिलो बनाउन।
Mission Asset Fund (MAF) ले प्रस्तावित सार्वजनिक चार्ज नियमको कडाईका साथ विरोध गर्दछ किनकि यसले अपराजेय क्षतिलाई पुर्‍याउँछ जुन आप्रवासी परिवारहरूमा रहेका हुन्छ। देश। दस बर्ष भन्दा बढिमा, MAF ले हजारौं कम आय भएका व्यक्ति, परिवार र आप्रवासीहरूलाई सहयोग गरेको छ सुरक्षित र सस्तो loanण उत्पादनहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्। जबकि हामी सान फ्रान्सिस्कोमा आधारित छौं, CA हाम्रो नाफारहित संस्थाको कार्यक्रम र सेवाहरूले सम्पूर्ण अमेरिकाभर समुदायहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
एक प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकको रूपमा, हामी पहिले नै डर देखिरहेका छौं कि यो प्रस्तावित नियमले हाम्रा ग्राहकहरूको जीवनमा निम्त्याउँदैछ; धेरै जसो आप्रवासी परिवारहरू हुन् जसले खानामा टेबुलमा राख्न मद्दत गर्न CalFresh जस्ता प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्छन्। खाडी क्षेत्र एक्लोमा, जसमा different बिभिन्न काउन्टीहरू सामेल छन्, त्यहाँ families40०, non०० भन्दा बढी गैर-नागरिकहरू छन् जसले परिवारमा नगद र ननकेश बेनिफिट प्रोग्रामहरूमा भाग लिन्छन् जुन हालको प्रस्तावित नियमको सार्वजनिक शुल्क निर्धारणमा विचार गरीरहेको छ। कुराको तथ्य यो हो, यो प्रस्तावित नियमले कम आय भएका आप्रवासी परिवारहरूलाई मात्र असर गर्दैन। यसले पहिले नै सबै आप्रवासीहरू र उनीहरूको अमेरिकी नागरिक बच्चाहरू सहित भय widespread्कर डर पैदा गरिरहेको छ।
उनीहरूको अध्यागमन वा वित्तीय स्थितिलाई वास्ता नगरी हामीले हाम्रो प्रयासहरू सबैलाई हाम्रो देशमा फस्टाउनको लागि अधिकतम अवसरमा राख्नु पर्दछ। यसको सट्टामा, सार्वजनिक नियम निर्धारण गर्दा यस प्रस्तावित नियमले छोटो-पक्षीय मापदण्डहरू खडा गर्दछ। एमएएफले वित्तीय सुरक्षाको महत्त्व बुझ्दछ र हामीलाई थाहा छ कि एक व्यक्तिको आय र क्रेडिट रिपोर्टले उनीहरूको सम्पूर्ण वित्तीय स्थितिको स्पष्ट चित्रण गर्दैन। वास्तवमा, हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको to देखि १२ महिना भित्रमा, MAF को १TP4T ग्राहकहरूको लगभग एक-पाँचौं उप-प्राइम क्रेडिट स्कोरबाट बच्न सक्षम छन्। यसले केवल देखाउँदछ कि त्यहाँ धेरै फरक कारकहरू छन् जसले कसैको कम क्रेडिट स्कोर निर्धारण गर्न भूमिका खेल्छन् र यो एक व्यक्तिको अध्यागमन स्थिति निर्णयको लागि एक कारकको रूपमा यसलाई समावेश गर्न अनुचित हुनेछ।
एमएएफले बाधा हटाउन अमेरिकामा सबै आप्रवासीहरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको लचिलोपना र संसाधनलाई मान्यता दिन्छ। यो प्रस्तावित नियम केवल हार्दिक र अन्यायपूर्ण मात्र होइन, तर यसले आप्रवासी परिवारहरूको लागि माथिल्लो गतिशीलतामा अवरोधहरू सिर्जना गर्दछ। सार्वजनिक शुल्कमा प्रस्तावित परिवर्तनहरू अमेरिकाको संस्थापक भावनाबाट विचलित हुन्छन्। आप्रवासीहरू हाम्रो समुदायको निर्माणमा सँधै महत्त्वपूर्ण रहन्छन् र रहन्छन्। सबै आप्रवासीहरूको विविध पृष्ठभूमिलाई अँगाल्ने र सम्मान गर्नुको सट्टा, यो प्रस्तावित नियम संघीय स्तरमा आप्रवासी विरोधी नीतिहरूको विस्तार हो जसले आप्रवासीहरूको झूटा कथनलाई जारी गर्दछ।
अन्य धेरै गैर-नाफामुखी प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकहरू जस्तै, एमएएफले सुनिश्चित गर्न चाहन्छ कि हाम्रो देशको प्रतिज्ञा सबैको लागि साँचो हो चाहे उनीहरूको उत्पत्ति वा वित्तीय स्थिति जस्तोसुकै भए पनि। लामो समयदेखि रहेका अधिवक्ताहरूको रूपमा हामी कहिले पनि यो नीति समर्थन गर्दैनौं जुन कि थप अमेरिकामा कमजोर आप्रवासी परिवारहरूलाई हानी गर्दछ। हाम्रो समुदायको हित र हाम्रो राष्ट्रको सफलतालाई दिमागमा राख्दै हामी होमल्याण्ड सुरक्षा विभागलाई सार्वजनिक चार्ज नियममा प्रस्तावित परिवर्तनहरू फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं।
सार्वजनिक शुल्क: सबै आप्रवासीहरूमा एक हमला
Joanna Cortez Hernandez मा अक्टोबर 11, 2018 द्वारा लिखित।
केही हप्ता अघि होमल्याण्ड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले एक प्रस्तावित नियम घोषणा गर्‍यो जुन सरकारले प्रयोग गरेका वा सार्वजनिक सुविधाहरू प्रयोग गर्ने सम्भावित आप्रवासीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्ने छ। यो प्रस्तावित नियमले मूल्या for्कनको लागि अपमानजनक मापदण्डहरू लागू गर्दछ, जस्तै एक आप्रवासीको क्रेडिट रिपोर्ट र स्कोरहरू प्रयोग गर्ने कि उनीहरू हो वा हुन सक्छ भनेर निर्धारण गर्न स्कोर "सार्वजनिक शुल्क"। यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्न, 4040० को क्रेडिट स्कोर (औसत औसत FICO स्कोर तल) को अर्थ ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने र प्राप्त नगर्ने बीचको भिन्नता हुन सक्दछ।
प्रस्तावित नियमले विषाक्त अमेरिका मूल्यहरूको विशेषता प्रस्तुत गर्दछ जुन वित्तीय स्थितिलाई पर्वाह नगरी सबै आप्रवासीहरूको योगदानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न असफल हुन्छ।
यदि लागू गरियो भने, नियमले गाह्रो बनाउनेछ: १) हाल बाहिरका आप्रवासीहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भिसा लिन अनुमति लिइरहेका छन्; वा २) आप्रवासीहरू जो पहिले नै संयुक्त राज्य अमेरिकामा छन् र एक कानुनी स्थायी निवासी (वा ग्रीन कार्ड होल्डर) एक परिवार सदस्य वा उनीहरूको रोजगारदाता मार्फत आवेदन दिन।
प्रस्तावित नियमको मूल कुरा सार्वजनिक सहयोग कार्यक्रमहरूको सूची विस्तार गर्न संघीय सरकारको प्रयास हो सुरक्षित स्थितिमा राख्न एक आप्रवासीहरूको योग्यता मूल्यांकन गर्दा कि विचार गरिनेछ। हालको सार्वजनिक शुल्क नीतिले केवल नगद सहयोग र सरकार द्वारा अनुदानित दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहलाई मात्र विचार गर्दछ तर प्रस्तावित नियमले यसलाई निम्न मुख्य सामाजिक सुरक्षा नेट प्रोग्रामहरू पनि समेट्ने छ: पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP), गैर आपतकालीन मेडिकेड, चिकित्सा भाग डी, र सेक्शन housing आवास भउचरहरू।
यो प्रशासन द्वारा नियोजित एक जानाजानी, मतलब उत्साहित रणनीति हो संयुक्त राज्य अमेरिकामा कमजोर आप्रवासी परिवारहरूलाई थप हानि पुर्‍याउँछ।
थप सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सार्वजनिक शुल्कको परिभाषालाई विस्तार गर्ने बाहेक, प्रस्तावित नियमले अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) का अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक शुल्क निर्धारण गर्दा विचार गर्न छोटो पक्षीय मापदण्ड पनि तय गर्दछ।
प्रस्तावित नियममा संघीय सरकारले नयाँ घरेलु आम्दानीको थोरैल्डको रूपरेखा प्रस्तुत गर्‍यो जुन संघीय गरीबी स्तरको २ 250० प्रतिशत भन्दा बढी पारिवारिक आम्दानी भएका आप्रवासीहरूलाई अत्यधिक समर्थन गर्दछ (जुन चार व्यक्तिको परिवारका लागि वार्षिक १ टीटीपी T२,००० भन्दा बढी हो)। प्रस्तावित नियमले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको creditण इतिहास खुलाउन र उनीहरूको वित्तीय स्थितिको भारित कारकको रूपमा स्कोर गर्न अनिवार्य गर्दछ। यसको सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमको विस्तारका साथै वित्तीय स्थिति जस्ता कारकहरूको दायराको विस्तारित विस्तारले गैर-नागरिक आप्रवासी परिवारहरूलाई “आत्मनिर्भरता” को अभावमा दण्ड दिने छ वा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, कम आय भएकोमा।
आप्रवासी परिवारलाई अन्तर्निहित सन्देश सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा हो - तपाईं र तपाईंको परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सहायता प्राप्त गर्ने वा संयुक्त राज्यमा तपाईंको भावी अध्यागमन स्थिति सुरक्षित गर्ने बीच छनौट गर्नुहोस्।
कम आय भएका आप्रवासी परिवारहरूमा थोपाउन यो क्रूर र अन्यायपूर्ण दुविधा हो। तर यस विषयमा तथ्य यो हो कि यस प्रस्तावित नियमले कम आय भएका आप्रवासी परिवारहरूलाई मात्र असर गर्ने छैन। यो पहिले नै व्यापक भय पैदा गर्दै छ सबै आप्रवासीहरू - उनीहरूको अमेरिकी नागरिक बच्चाहरू सहित।
एक नाफारहित संस्थाको रूपमा आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्दछ, एमएएफले वित्तीय सुरक्षाको महत्त्व बुझ्छ र सुरक्षित र सस्तो loanण उत्पादनहरूमा पहुँच गर्दछ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै आप्रवासीहरु द्वारा प्रदर्शित आर्थिक अवरोधहरु लाई पार गर्न प्रदर्शित लचिलोपन र संसाधनता पहिचान गर्दछौं। यो प्रस्तावित नियम केवल हार्दिक र अन्यायपूर्ण मात्र होईन, तर यसले कम आय र आप्रवासी परिवारहरूको लागि माथिल्लो गतिशीलतामा बाधा उत्पन्न गर्दछ। यो यी परिवारहरूको फस्टाउने अवसरलाई अस्वीकार गर्न डिजाइन गरिएको हो।
दश भन्दा बढी वर्षहरूमा हजारौं कम आय भएका व्यक्तिहरू, परिवारहरू, र आप्रवासीहरूले उनीहरूको establishण स्थापना गर्नका लागि समर्थन गर्दछन्, हामी जान्दछौं कि एक व्यक्तिको आय र reportण रिपोर्टले मात्र तिनीहरूको सम्पूर्ण वित्तीय स्थितिको स्पष्ट चित्रण गर्दैन।
एमएएफ, अन्य धेरै नाफामुखी प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकहरु जस्तै, DHS 'सार्वजनिक चार्ज सम्बन्धित प्रस्तावित नियम आप्रवासी परिवारमा निम्त्याउने हानि देख्नेछ। यो प्रस्तावित नियम अमानवीय र दंडात्मक आक्रमण हो जसले देशभरि कमजोर आप्रवासी परिवारहरूको स्वास्थ्य र कल्याणलाई नष्ट गर्दछ।
पछिल्लो बुधवार, डीएचएसले हालै फेडरल रेजिस्टरमा यसको प्रस्तावित नियम प्रकाशित गर्‍यो, यो ऐन जुन -० दिने सार्वजनिक टिप्पणी अवधि सुरू हुन्छ जुन सोमबार, डिसेम्बर १० मा बन्द हुनेछ। यो 60०-दिन सार्वजनिक टिप्पणी अवधि को समयमा हो कि सार्वजनिक चार्जको मामिला बिरूद्ध हाम्रो कार्यवाही पहिले भन्दा बढी भयो।
झगडा धेरै टाढा छ र अभिनय गर्ने समय अहिल्यै हो!
एमएएफ हाम्रो आप्रवासी समुदायहरूको लागि वकालत गर्न र यस दमनकारी प्रस्तावित नियमको विरोध गर्न प्रतिबद्ध छ। तपाइँ तपाइँको आवाज को समयमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहोस् सार्वजनिक टिप्पणी अवधि वा तपाईको बारेमा बढि जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ आप्रवासीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने हाम्रो काम; हामी तपाइँलाई सबै आप्रवासी समुदायहरूको निष्पक्ष र उचित उपचारको लागि सहयोगीको रूपमा हामीसँग खडा हुन हौसला दिन्छौं।